Umaki: ubuholi bokucabanga | Martech Zone
Umaki: ubuholi bokucabanga
Ubhadane lweCovid-19 luveze ukuthi kulula kanjani ukwakha - nokucekela phansi - uphawu. Impela, wona kanye uhlobo lokuthi ama-brand akhulumisana kanjani uyashintsha. I-Emotion ibilokhu ingumshayeli ophambili ekuthathweni kwezinqumo, kepha yindlela ukuxhumana okuhlangana ngayo nezithameli zayo okuzonquma impumelelo noma ukwehluleka emhlabeni we-post-Covid. Cishe uhhafu wabenza izinqumo bathi okuqukethwe ubuholi benhlangano kunomthelela ngqo emikhubeni yabo yokuthenga, kepha izinkampani ezingama-74%
NgoLwesihlanu, January 24, 2014 NgeSonto, ngoFebhuwari 9, 2014 Douglas Karr
Sabelane ngama-infographics ambalwa ku-2014 - Amathrendi Wokumaketha NgeDijithali nokubikezela, Amathrendi Wokumaketha Okuqukethwe, Uhlu lwezifiso Zokumaketha Amabhizinisi Amancane Nokuqagela Kwemidiya Yezenhlalo. Abantu baseWebMarketing123 bahlole abathengisi abangama-500 + mayelana nezinhloso nezinselelo zabo eziphezulu zedijithali ukuthola ukuthi yini okusebenzayo, okungasebenzi, nokuthi bahlelelani ku-2014. Landa ikhophi yamahhala ye-3rd State State of Digital Marketing Report yabo namhlanje.